Versa Token စျေး - အွန်လိုင်း VERSA ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Versa Token (VERSA)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Versa Token (VERSA) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Versa Token ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
VERSA – Versa Token
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Versa Token တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Versa Token များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Versa TokenVERSA သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0286Versa TokenVERSA သို့ ယူရိုEUR€0.0241Versa TokenVERSA သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0217Versa TokenVERSA သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.026Versa TokenVERSA သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.256Versa TokenVERSA သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.179Versa TokenVERSA သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.634Versa TokenVERSA သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.106Versa TokenVERSA သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.038Versa TokenVERSA သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0395Versa TokenVERSA သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.64Versa TokenVERSA သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.221Versa TokenVERSA သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.152Versa TokenVERSA သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹2.14Versa TokenVERSA သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.4.82Versa TokenVERSA သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0391Versa TokenVERSA သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0427Versa TokenVERSA သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.888Versa TokenVERSA သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.199Versa TokenVERSA သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥3.02Versa TokenVERSA သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩33.83Versa TokenVERSA သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦10.83Versa TokenVERSA သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽2.09Versa TokenVERSA သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.792
Versa TokenVERSA သို့ BitcoinBTC0.000002 Versa TokenVERSA သို့ EthereumETH0.00007 Versa TokenVERSA သို့ LitecoinLTC0.000481 Versa TokenVERSA သို့ DigitalCashDASH0.000285 Versa TokenVERSA သို့ MoneroXMR0.000303 Versa TokenVERSA သို့ NxtNXT2.04 Versa TokenVERSA သို့ Ethereum ClassicETC0.004 Versa TokenVERSA သို့ DogecoinDOGE8 Versa TokenVERSA သို့ ZCashZEC0.0003 Versa TokenVERSA သို့ BitsharesBTS1.1 Versa TokenVERSA သို့ DigiByteDGB1.03 Versa TokenVERSA သို့ RippleXRP0.0938 Versa TokenVERSA သို့ BitcoinDarkBTCD0.000964 Versa TokenVERSA သို့ PeerCoinPPC0.0997 Versa TokenVERSA သို့ CraigsCoinCRAIG12.75 Versa TokenVERSA သို့ BitstakeXBS1.19 Versa TokenVERSA သို့ PayCoinXPY0.488 Versa TokenVERSA သို့ ProsperCoinPRC3.51 Versa TokenVERSA သို့ YbCoinYBC0.00002 Versa TokenVERSA သို့ DarkKushDANK8.97 Versa TokenVERSA သို့ GiveCoinGIVE60.57 Versa TokenVERSA သို့ KoboCoinKOBO6.27 Versa TokenVERSA သို့ DarkTokenDT0.0263 Versa TokenVERSA သို့ CETUS CoinCETI80.75
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 07 Aug 2020 01:00:03 +0000.